Mitifitra lalao roa mpilalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Mitifitra lalao roa
ny roa mahafinaritra kokoa ny hitifitra, fa satria ao amin'ny sokajy tolotra maro mba hilalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Shooting roa. Disassemble ny fitaovam-piadiana sy ny mikendry azy io mba handrakotra hafa nandritra ny ady asa. Na mety ho fahavalony ianao? Ary ny vokatry ny ady dia miankina amin'ny marina ny masonao, rehefa mandeha afa-tsy ny solosaina, na namana, na dia ny papa, ny ady dia ho virtoaly ka hatramin'ny farany. Ary tsy mihevitra ny amin'ny famelan-keloka, ianao, koa, nijery eto mba haneho ny fahamboniany eo amin'ny ady.
Fiainana mafy Gangland
Boss vs Mpiady
Golden Duel Fast Manaova
Fianjerana sy Bernstein Cluck sy Chuck
Super hamotipotika Buttons
mr. Mpilalao bala 2
BlockGunner 1 vs 1
Lalao Mitifitra roa tamin'ny Category:
Fiara mifono vy Online
Farany Mitifitra lalao roa
Lalao roa mpitifitra mamela anao milalao an-tserasera amin'ny namana nandritra ny fitendry
Lalao Online Rehetra Mitifitra lalao roa mpilalao an-tserasera
Na dia milaza fa ny miaramila iray any an-tsaha, nefa hentitra, rehefa miady ny lafiny mpiara-miasa, vonona ny hanampy ka hasarony ny vodi-lalana.
Nahoana no mahaliana ny hilalao lalao fitifirana roa
Lalao mpitifitra roa fotsiny no asa tsara amin'ny io asa io, ary tsy mahatsiaro ho mahazo aina nandritra ny fitantanana ny iray fitendry araka mitaky bokotra efatra monja ho an'ny tsirairay, dia antontan-javatra akaikin'ny samy hanao ny asa. Fa ny hafanam-po izay ny manipulations no atao, tsy mampitaha ny zavatra hafa. Rehefa dinihina tokoa, amin'ny fotoana rehetra dia afaka miresaka bebe kokoa paikady sy mandamina ny hetsika izay tsara kokoa hiatrehana ny asa. Afaka manolotra iray hafa foana kilalao amin ny namana, rahalahy na dada, ary araka ny vita dia ifanakalozy hevitra ny antsipiriany ny ady. Zazalahy tsirairay velona ny miaramila sy ny faniriana mba hizaha toetra ny tenany sy ny hafa mandritra ny fanadihadiana. Rehefa miresaka momba ny olona fa afaka handeha hiaraka aminy ao amin'ny fitrandrahana (na tsia), jereo ity fanambarana ity eo amin'ny tena fiainana dia tena sarotra. Lalao roa mpitifitra mamela anao hiaina tsirairay ny azo antoka sy tsy mivadika ao amin'ny tontolo virtoaly, izay ny loza ao amin'ny Monitor, fa manambara ny fototry ny olona. Misafidiana ny tari-dalana tany io kosa Eleazara
Ao ireo vokatra lalao dia afaka miady nifanakaiky sy mba hizara ny fifaliana ny fandresena karavato, na maka ny mpanohitra sy hanatanterahana fandresena manokana. Na dia amin'ity tranga ity, dia misy ny soa avy amin'ny asa, ary afaka mamaha ny ela-mandeha ady, nanao miloka eo ny vokatry ny ady tsy mivoaka. Anisan'ireo kilalao maro misy ny misafidy akaiky ny zava-misy ny hetsika, izay ny tafiky ny firenena samy hafa tonga mba hiady izy samy izy na hampiasa ny tantara mahafinaritra.
Aiza ary ahoana no hiady
ny zava-niseho dia nivelatra eto an-tany, ao amin'ny habakabaka, eo amin'ny rahona sy ambanin'ny rano, satria afaka hitifitra sy miady, fa tsy iray ihany no mifehy miaramila na tafika, fa fitaovam-piadiana ihany koa. Fiara mifono vy, fiaramanidina, submarines, mpitsangantsangana na sambo kely dia ny fomba mampihetsi-po ary imbetsaka hihamaro fitaovam-piadiana. Sambon ankapobeny manilika ny fifandraisana manokana eo amin'ny olona sy hanova ny ady ho amin'ny fampisehoana. Ary ny ankizy teo an-tokotany nanapaka tao an-ekipa, nanorina ny fiarovana mafy, ary nanangana ady amin'ny snowballs.
Armed fifandonana teo amin'ny tantaran'ny olombelona
tantara tsy mahalala fotoana, na oviana na oviana ny ady teo amin'ny toerana manokana toerana. Ny olona rehetra ny fotoana momba ny zavatra miady hevitra, mahita ny fifandraisana, miezaka olona ny hanandevo sy hanamarina ny tenany sy ny fomba fijeriny fitsipika.
Ny fandehanana any amin'ny Wild West, handamina rehefa niady nandritra ny roa, ary hitady vahaolana ho ela-mitsangana fifandirana. Cowboys matetika no mampiasa izany fomba hametrahana lalàna amin'ny olana sy ny, na dia ny tsara mandrakariva ry zalahy tsy ho faty, tsy voasoratra Hoy ny lalàna - izay nivadika ho marina, izany no marina.
Primitive olona tsy mbola namorona ny basy, nefa efa fantany momba ny slingshot. Mitifitra vato, dia mety hiteraka ratra mafy raha lavo marina amin'ny ampinga lehibe. Ary raha mandeha any amin'ny Moyen Âge, ny mpandefa zana-tsipìka, dia hasehoko anao ny fahaizany, mikapoka ny fahavalo avy lavitra.
Raha mijery ny lanitra feno kintana, mahatsapa ny fiadanana sy ny hatsaran-tarehy mangina manenika, mitarika hevitra ho mahafinaritra sy filozofia fandinihana. Manam-pahaizana ihany koa ny mandray izany ho toy ny zava-miafina izay miandry nahay, afaka ny hamaha azy. Tantsambo sy ny tongotra lavitra hamakivaky ny kintana, mamaritra ny fotoana sy ny fitarihan'ny lavitra. Miaramila ihany no indro ao amin'ny midadasika haavon'ny saha goavana ho an'ny miaramila tetika. Izy ireo ankehitriny hampitaovana ny galactic mpitsangantsangana, fampitaovana azy ireo tamin'ny laser basy mahery vaika, ary ho vonona ny hanatanteraka amin'ny ady misokatra.
More lalao ho an'ny roa mpitifitra - izany no niady anjara avy amin'ny tantara an-tsary, boky feno sary, sarimiaina sy ny kilalao hafa storylines. Na Super Mario mitondra ny milina, raha manery ny toe-javatra.